बढ्दै छ नेपालबाट बाहिरिने ‘रेमिटेन्स’, ३ महिनामै १ अर्ब ३१ करोड रकम बाहिरियाे – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २३ मंसिर सोमबार १०:०७
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को पहिलो ३ महिनामा नेपालबाट विप्रेषण (रेमिटेन्स) मार्फत रू. १ अर्ब ३१ करोड रकम बाहिरिएको छ । गत आवको प्रथम त्रैमासमा विप्रेषणमार्फत रू. १ अर्ब ८ करोड बाहिरिएको थियो । चालू आवको प्रथम त्रैमासमा विप्रेषण उत्प्रवाह (बाहिर जाने) २१ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपालका विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत विदेशी कामदारहरूले उक्त रकम विदेश पठाएका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय नेपालबाट वार्षिक रू. १० अर्बभन्दा बढी विप्रेषण उत्प्रवाह हुने गरेको छ । गत आव २०७५/७६ मा विप्रेषणमार्फत कुल रू. १० अर्ब ८० करोड रकम बाहिरिएको थियो, जुन आव २०७ं४/७५ को तुलनामा ८६ दशमलव २० प्रतिशतले बढी हो । आव २०७४/७५ मा रू. ५ अर्ब ८० करोड बराबरको विप्रेषण उत्प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
नेपालबाट कुन देशमा कति विप्रेषण उत्प्रवाह भयो भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकसँग यकिन तथ्यांक छैन । तर, नेपालदेखि भारतमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण उत्प्रवाह हुने गरेको राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालमा भारतका कामदार बढी भएकाले त्यहाँ सबैभन्दा बढी विप्रेषण उत्प्रवाह हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले नेपालबाट यति विप्रेषण उत्प्रवाह हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘आर्थिक वृद्धिदर बढाउन विदेशी जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ । अहिले देशको आर्थिक वृद्धिदर बढिरहेको छ । तसर्थ, यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र विप्रेषण उत्प्रवाह बढ्ने गरेको भए अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्ने थियो ।’ नेपालमा वार्षिक रू. ८ खर्बभन्दा बढी विप्रेषण आप्रवाह हुने गरेको छ । यो खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ।
PREVIOUS Previous post: लगातार अवरोधपछि सरकार सडक विस्तारको सट्टा मर्मतमा सीमित
NEXT Next post: साग अन्तर्गत आज १३ खेल हुँदै, महिला फुटबलको फाइनलका लागि नेपाल र भारत भिड्ने